TALOOYINKA UGU SARREEYA EE KORITAANKA GENTIANKA - KORDHINTA GEELKA
Gentian (Magaca Laatiin - Gentiana) waa magaca guud ee dhowr boqol oo dhirta, labadaba iyo sanadlaha, koritaanka adduunka oo idil (marka laga reebo Africa iyo Antarctica), sidaas darteedna ma aha mid muuqda oo kaliya muuqaalka, laakiin sidoo kale xaaladaha sii kordhaya iyo daryeelka.
Si kastaba ha ahaatee, waa nooca kala duwanaanta noo ogolaaneysa inaan ku guuleysanno taas, beerashada dhowr nooc oo gentian ah ee jardiinooyinka, waxaad ku guuleysan kartaa saamaynta ay ubax joogto ah inta lagu jiro xilli. Oo ubaxyada gentian waa cajiib ah: waxay inta badan ku metelayaan dhammaan mugdiga buluuga ah - laga bilaabo midab buluug ah ilaa mugdi ah, laakiin sidoo kale waxaa jira noocyo leh ubaxyo, jaalle, casaan iyo guduud.
Ma taqaanaa? Warshadda ayaa magaceeda lakulmisay magaca Boqorka Illyria - gobol gaboobay oo ku yaal galbeedka Jasiiradda Balkan - taas oo ay ku xirantahay taariikhyahanadu, waxay ku daaweeyeen cudurka daacuunka ee Gentian. Sida magaca Ruush ee geedka, wax waliba waa fududahay halkan: xididdada iyo caleemaha Gentian waxay leeyihiin dhadhan qadhaadh, markaa gentian ah.
Qiyaastii 90 nooc oo geel ah ayaa la beeray. Inta badan noocyada yurubiyanka ah ee gentiyaanka ah ayaa ku kordhay dalalkeena, laakiin noocyada Aasiyada Aasiya ma aha wax xiiso leh.
Waa in la qirto in, dhammaan racfaanka muuqaalkiisa, gentian wali ma uusan helin caan ka mid ah ubaxlayaasha, oo waxaa jira sababo ujeeddadan. Sababtoo ah badi noocyada gentian iyo kala duwanaanshaha xaaladaha dabiiciga ah ee koritaankooda, waa mid aad u adag in la siiyo talooyinka guud ee daryeelka ee warshad this: laakiin waxa si fiican ku haboon ee hal nooc oo kale waa gebi ahaanba aan la aqbali karin.
Waxaa sidoo kale jira xaalado ah in gentian ay u muuqato in si weyn loo soo qabanqaabiyey oo ku koray xaalado si taxadar leh loo diyaariyey, laakiin bloom dheer oo la sugayay ma aysan dhicin. Laakiin waxay qaadatay dhowr mitir si ay u dhaqaajiso dhirta, dhibaatadana waxaa lagu xallin jiray lafteeda. Si kale haddii loo dhigo, gentian - warshad awood leh iyo inta badan lama saadaalin karo. Oo weliba waxaa haboon in la isku dayo in ay koraan ubaxkan quruxda badan on aad u gaar ah.
Doorashada meel si ay u koraan gentian
Sida hore loo sheegay xulashada goobta iyo xulashada ciidda loogu talagalay gentian waxay ugu horreyn ku xiran tahay shuruudaha noocan ah ee gentiana ku kora dabeecadda. Noocyada dhirta qaarkood waxay jecel yihiin meelaha qorraxda, kuwa kale waxay ku raaxaystaan ​​hooska. Goobjoogaha naqshadda muuqaalka waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu qurxiyo xayawaanka alpine, laakiin ikhtiyaarkan ma aha mid ku habboon ubaxyada hore iyo kan dambe ee dhirta kuwaas oo doorbidaya hooska qayb ahaan ah oo aan sidoo kale lagu diiriyo xagasha galbeed ee aagga qorraxdu furan iyo ciid qallalan.
Goob wanaagsan oo loogu talagalay dhirta, xilliga ubax ee kaas oo dhacaya xilliga dayrta, waa meel qoyan u dhow meydka biyaha. Waa hagaagaa xayeysiiska garso ee Andrews. Laakiin noocyada noocan oo kale ah sida gentian-waaweyn, iyo sidoo kale bracteosa, parryi, sceptrum (ma jiraan magacyo Ruush) u baahan tahay qadar ku filan qorrax iyo waqti isku mid ah carrada qoyan. Giriigga dayrta ee ubaxa waxay kaloo jecel yihiin qorraxda, laakiin waxay u baahan yihiin qoyaan ka yar carrada.
Guud ahaan, waa in la ogaadaa heerka darajada ee gentian si ay iftiiminta iyo ka kooban ciidda ee noocyada dhirta kala duwan waa kala duwan: Qaar ka mid ah gentianas waxay awoodaan inay koraan kuna horumaraan meel kasta, kuwa kale, si adag u hoggaansanaanta xaaladaha sii kordhaya ayaa ah mid muhiim ah. Dhanka kale, noocyada qaar ka mid ah gentian koraan halkaas oo ku dhowaad jirin dhirta kale qaadan xididka. Tusaale ahaan, geesaha ugu daran ee Bavaria, waxaad ka heli kartaa dhalaalaya dhalaalaya ee noocyada Asiya ee gentian.
Haddii aad isku daydo inaad keento shuruudaha guud ee gentianka xaaladaha dibedda, waxaan dhihi karnaa in dhammaan noocyada dhirta ay doorbidaan meelo qoyaan badan leh, carrada waa in si wanaagsan loo miiray, laakiin aan dhaafin, waa inay jirtaa iftiin ku filan, laakiin kulaylka badan ee gentianka ayaa burburaya.
Sidaa awgeed gabagabada: xaaladaha jawiga cimilada ee gentianka la qorsheeyay in uu kobciyo, yaryar ee muuqaalka muuqaalka waa in la doortaa waana in dadaal badan loo sameeyaa si loo ilaaliyo ilaalinta warshadda illaa iftiinka iftiinka qoraxda. Goobtu waa inay ahaato iftiin subaxdii iyo habeenkii, laakiin waxay soo ifbaxday galabtii.
Xayawaanka, xaalada ayaa xitaa aad u adag. Haddii aad qaadato gentian aan shaki lahayn tusaale ahaan, noocyo kala duwan ayaa doorbidaya carrada dufanka, kuwa kale - alkaline. Xaaladdan, ka gudubka noocyada kala duwan natiijooyinka kale ee geedka oo si isku mid ah ugu kori kara ciidda iyadoo leh heerar kala duwan oo leh kiimiko. Ma jiraan wax midab ah oo ku saabsan falcelinta ciidda iyo wakiillada Aasiya ee gentianka.
Sidaa daraadeed, geelka Shiineeska ah ee reer Shiinuhu ma kori doono dhammaan ciidda cawska geedka, xubnaha kale ee cirku, waxay yiraahdaan, Genre Farrer, uma baahna joogitaanka lime ee ciidda. Qaar ka mid ah geelka Aasiya, ubax xagaaga (tusaale ahaan, Dahurian, dib u habeyn, iyo kuwa kale), liddi ku ah, waxay jecel yihiin ciidda leh lime badan oo leh aalado yar. Waxaa jira dhowr ginni oo jilicsan oo Asian, oo jecel carrada cagaarka ah, laakiin wuxuu ku jiri doonaa mid kale, haddii aysiidheedu aysan aheyn mid aad u sarreeya.
Wixii ah dhoobo gantaal ah waa mid ku habboon, laakiin dhirta, kuwaas oo goobta dhalashada waa Waqooyiga Ameerika, koraan ugu wanaagsan ee isku dar ah peat, carrada sheet iyo ciid. Gacanka Aasiya oo ka yimid Aasiya, gaar ahaan kuwa dillaacsan xilliga dayrta, waxay doorbidi karaan qaybaha sida dhoobada iyo dhagaxyada si ay u helaan carrada caarada leh. Waa in maskaxda lagu hayo Dabeecadda, qaar ka mid ah noocyada gentianka ah waxay ku koraan carrada dhagaxa, qaar ka mid ah ciidda, iyo qaar (tusaale ahaan, genus grey Japanese) koraan on ash volcano.
Noocyada tallaalka ah ee gentian, sida caadiga ah, ayaa ka yar dalbashada ciidda, waxa ugu muhiimsan waa in xididdada dheer ee aan ka soo horjeeda lakabka cufan sida dhoobo ama quruurux. Sida tusaale ahaan dhirta noocan oo kale ah ayaa lagu soo saari karaa noocyo yurub ah - jaale, gentian, gentian, iyo guduud iyo kuwo kale. Isla mar ahaantaana, xaaladda ku saabsan ilaalinta qorraxda qiiqa ayaa la ilaaliyaa. Noocyada kale ee carrada aan hoos u dhicin, waxa kaliya oo ay tahay qulqulatada qoyaanka sare (tusaale ahaan, gentian waa mid adag, qayb-yar, iyo Beelaha).
Beerto geedo yar yar oo gentian ah ee dhulka u furan
Waa suurtogal in la beero geedo gentian dilka ah oo dhulka ah oo furan wakhti kasta. Si kastaba ha ahaatee, waa in la fuliyo nidaamka aan ku jirin xagaaga kuleylka ah, laakiin inta lagu jiro xilliga ka baxsan, waa in maskaxda lagu hayaa in beeritaanka dayrtu ay la xiriirto khatarta ah in dhirta ka soo baxda dhulka ay ku jirto miisaan culus ilaa burka dhulka si fiican loogu xoojiyo meel cusub. Sababtan awgeed, marka laga beerto gentian dayrta, dhulka ku wareegsan geedka waa in si gaar ah loo taxadaro.
Waa muhiim! Muujinta habka xididka gentianka ah waa in si fudud loo eego dhaawaca farsamada. Sidaa darteed, si aad u soo saaro warshadda ka soo weelasha for transplanting waa in aad si taxadar leh, pre-qoyan iyo loosening qolka dhulka.
Isla markiiba ka dib markii la beero, dhirta waxaa loo waraabiyo si fara badan, Iyadoo la tixgelinayo sidoo kale in toddobaadyada ugu horreeya ee gentian dhalinyarada gaar ahaan laga bilaabo qalajinta ka baxa ciidda, sidaas si joogto ah waraabinta xaaladaha degaamada waa gebi ahaanba lagama maarmaan.
Hababka taranka ee Gentian
Marka laga hadlayo gentian, waxaa jira laba xulasho habka: abuurka ama qaabka daaqsinka (iyada oo loo qaybinayo baadiyaha, gooynta, dhejinta). Xulashada noocyada kala duwan ee ku xiran inta badan warshadaha kala duwan.
Gentian waxay leedahay biqilka aadka u liita markaad ka soo baxdo abuurka, taas oo ugu horreyn ay sabab u tahay qiyaasta yar. Sidaa darteed, si loo hagaajiyo natiijada waxaa si xoog leh lagula talinayaa in ay isticmaasho miraha cusub ee la goostay oo horay loo dhajiyo, ereyga taas oo ka duwan noocyada dhirta kala duwan. Tusaale ahaan, jiilaalka macmalka ah ee noocyada koraya ee koraya buuraha waa inay ugu yaraan laba bilood soconayaan, haddii kale miraha waxaa laga yaabaa inay hurdaan ilaa guga xiga. Noocyo kale oo geel ah ayaa u baahan hal bil si ay u hormariyaan embriyaha. Wixii dhirta, miraha waa in lagu daraa saddex qaybood oo ciid ah waxaana lagu riday qol leh hawo qoyan, hawo wanaagsan iyo heerkulka ilaa +7 ° C Maqnaanshaha fursadaha, waxaad isticmaali kartaa qaboojiyaha ujeedadaas.
Abuuritaanka miraha gentian ee geedo waxay noqon kartaa laga bilaabo Jannaayo ilaa Abriil, iyadoo ku xiran xaaladaha cimilada iyo noocyo dhirta. Ka hor inta beerto, weel ka mid ah miraha waxaa laga saaraa meel qabow oo la dhigo kulaylka biqilka. Kadibna si toos ah u socod si beerista. Si arrintan loo sameeyo, miraha waxaa lagu faafiyaa dusha sare ee substrate qoyan, iyaga oo si fudud ugu rusheeya topka leh compost, tampi ciidda wax yar oo dabool weelka leh filim ama dhalo.
Si looga fogaado qalajinta, ciidda waa in si joogto ah loo buufiyaa (ha biyo ahayn!), Sidoo kale si joogto ah ayaa loo duubay si aan abuurka u bilaabin leexinta. Caleemaha Gentian waxay u muuqdaan illaa 2-3 toddobaad. Marka ay tani dhacdo, waxay bilaabaan inay si tartiib tartiib ah u kordhiyaan xilliga hawada si ay u furaan geedo gebi ahaanba ka dib.
Wixii horumarinta haboon ee geedo waxay u baahan yihiin inay doortaan meel quruxsan leh heerkul aad u sarreeya (ugu badnaan +18 ° C).
Ka dib markii la sameeyo laba caleemo run ah, geedo ku quusiyaan koobab gaar ah. Gentian dhulka ku furan waxaa lagu beeray karaa guga dabayaaqada - xagaaga hore. Masaafada u dhaxaysa dhirta waa in aysan ka yarayn 20 cm Sida lagu sheegay, illaa gentian si fiican u rujin, waraabinta joogto ah waa muhiim u tahay dhirta.
Hab kale oo geedka beer abuurka ah waa jiilaal beereed dhul beereed. Sariirta waa in ay ahaato mid si haboon u degan (waxaa xitaa lagu talinayaa in laga boodo dhulka), ka dibna miraha yar yar ayaa si toos ah loogu dhajiyaa dusha sare, waxoogaa yar oo riixaya dhulka, kuwa waaweynna waxaa lagu rusheeyaa lakab khafiif ah oo carrada ah. Sidaa si la mid ah, miraha waxaa lagu beeray dheriyo diyaarsan, oo markaa lagu meeleeyaa meel cidlo ah, doorbidayaa qaybaha hoose ee goobaha halkaas oo baraf badan lagu uruuriyo.
Laga soo bilaabo abuurka gentian bilaabay inuu Bloom sanadka saddexaad.
Qeybinta baadiyaha waxay jajabisay noocyo kala duwan oo gentian ah. Suurtagal maaha in la isticmaalo habka noocaas ah ee la xidhiidha noocyadaas kuwaas oo nidaamka xididku yahay ul qudh ah, kuwaas oo geedi socodka iswaafajiyana uu sii fidayo.
Waxaad kala qaybin kartaa geela badan oo Asia ah, ubaxyada dayrta, iyo sidoo kale noocyada guga-ubaxa tubbada ah.
Waa muhiim! Xaaladda ugu weyn ee lagu guuleysto baadiyaha waa in la ilaaliyo inta ugu badan ee suurtogalka ah ee cawska dhulka, qodaya geedka si aanay u waxyeeleynin xididdada jilicsan, oo biyo badani ka dib beerashada.
Waxaan dooran karnaa qaangaar weyn oo qaangaar ah oo ka tirsan gentian, si taxadar leh u qodo dhulka iyo u kala qaybso 2-3 qaybood oo leh majarafad ama mindi fiiqan. Qeyb kasta oo ka mid ah waa in uu leeyahay burooyin kobcin iyo qayb ka mid ah xidid ku filan koritaanka. Waxaad isla markiiba abuuri kartaa dhirta dhalinyarada ah meel joogto ah, haddana waxaa lagula talinayaa in aad marka hore ku riddo weel gooni ah si dhirta ay marka hore u dhisto nidaam xidid wanaagsan (xaaladdan, xitaa xitaa ma dhali kartid qayb ka mid ah baadiyaha, laakiin caleemaha dhinaca gaarka ah). Waxaad xaqiiqdii u baahan tahay inaad isticmaasho doorashadan haddii ciidda goobta ku taal aad u iftiimiso. Si kastaba ha noqotee, marka la eego noocyada sida gentian gentian, iyo noocyada of angulose iyo opium, taxaddarrada noocan oo kale ah waa mid aad u adag - kuwa geelan waa ay fududahay in loo kala qeybiyo, waxayna ku sii fiicnaanayaan by tallaalka.
Waqtiga loo qaybinayo baadiyaha waxay ku xiran tahay nooca dhirta. Gentian-ubeyn gentian ah ayaa loo qaybiyaa dayrta, ka dib markii ubaxu dhameeyay (geedka waqtigaani wuxuu caleemaha caleenta ku dhajiyaa saldhiga duurka, kuwaas oo ku habboon in la isticmaalo marka la qaybinayo), iyo noocyada dhirta sida, tusaale ahaan, dadka aan Yuhuudda ahayn ee qumman, Alpine, dhuuban-leaved, dinar - waxa fiican in la beero xagaaga hore. Daraasada gentian waxaa loo qaybiyaa guga horraanta, kahor dhirta dhirbaaxada, Farrer ee gentian ee Abriil, iyo lixda laanteeda ee bisha May. Qasab maaha inay halis ugu jirto kala qaybinta baadiyaha xilliga dayrta ee aagagga cimilada ah halkaasoo dhaxan ay timaaddo waqti hore, ama haddii dhirta ay soo daahday.
Marka la eego dadka reer Geesiga ah ee xilliga kuleylaha, waxaad sidoo kale isku dayi kartaa inaad isticmaasho qaybta baadiyaha, haddii dhirta ay aad u weyn tahay, laakiin ma jirto wax dammaanad ah oo lagu guuleysto habkan. Mabda 'u qaybinta isku mid ah, si loo helo fiicnaanta dhirta waxaa lagula talinayaa in marka hore lagu dhex daro weelal qoto dheer oo loogu talagalay sameynta nidaamka xididka.
Haddii ay jirto wax shaki ah in ay suurtogal tahay in la isticmaalo qaybta baadiyaha ee hal ama nooc kale oo gentian ah, waxaa jira fikrad sahlan: haddii gentiana la koro mashiinno, waa la kala qaybin karaa, haddii ay ku koraan hal rosette, waxaa fiican in la isticmaalo habka faafinta abuurka.
Ku dhufashada guntian gentian ayaa muhiim u ah noocyada Shiinaha ee xilliga dayrta. Laga soo bilaabo warshad aan weli bloomed, gooyn yaryar ayaa la gooyaa oo lagu aasay isku dar ah qoyaan ka mid ah ciid adag (ganaax ujeedooyinkani uma aha mid ku haboon), peus iyo humus caleen. Waxaa muhiim ah in halabuurka ee substrate ma aha dhoobo ama lime. Hawada for rooting guulaysto waa inay ahaato mid aad u qoyan, halka warshad waa in si fiican u hadheen.
Waqtiga loogu talagalay mar labaad waxay ku xiran tahay nooca gentianka. Geedka Farrer-ka, lix-caleen iyo Lawrence gooyay xagaaga iyo qaad guntimi aad u gaaban (aan ka badnayn 6 cm). Goobta quruxda badan ee shiineeska ah ee lagu qurxiyo Shiineeska ah ee lagu qurxiyo waa la qaboojiyay xilliga dayrta hore, maaddaama ay ka dhigayso mid deg deg ah.
Ma taqaanaa? Xeerarkan soo socdaa ayaa caawin kara: dambe ee ubaxyada gentian, muddada dheer gooyn xidid.
Si kastaba ha ahaatee, waa wax aan suurtagal ahayn in la gooyo gentian ubax, iyo xataa ka yar si ay u isticmaalaan caleemaha leh burooyinkeeda sida gooyn.
Qummanaan-stemless stemless waxaa laga sameeyey gentian-ubax gentian, iyo sidoo kale gentian gentian. Gooyn waxay ka fiican tahay in la gooyo xagaaga hore. Nidaamkan soo saariddu sidoo kale waa ku habboon tahay gentian-gentian iyo Lagodechians, laakiin gooyntooda waa in la gooyaa ee xidid aad u.
Sida noocyada kale ee gentian ah, waa la xiri karaa, laakiin caleemaha noocan oo kale ayaa xidid si xun, sidaas darteed rooting waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo kiciyeyaasha gaarka ah, iyo sidoo kale lagu koriyo oo macmal ah si loo kordhiyo qoyaan. Qaybta hoose ee jirida waa in laga saaraa caleemaha. Xaalad muhiim ah - aasaasida waa in lagu qabtaa meel qaboow ah.
Siyaabo kale oo lagu faafiyo gentiga ayaa ah mid layaab leh. Waa ku filan inaad hoos udhigto dhulka dooxo dheer oo warshad ah, waxaad ku rushaysaa dhexda leh lakabka carrada aadka u sareysa ee bacrin ah kuna hagaaji yar yar ama pin. Haddii ciidda si fiican u qoyan yahay, dayrta caleemaha waxay qaadan doontaa xidid, waxaana laga soocaa laga bilaabo geedaha hooyada oo lagu beddelaa dheri si koraysa.
Doorashada lamaanayaasha ee gentianka
Xulashada saxda ah ee lamaanayaasha ee gentian waxaa ka mid ah iyada oo la tixgelinayo shuruudaha looga baahan yahay ciidda, iftiinka iyo qoyaanka: waa ku filan in la helo warshad leh doorashooyin la mid ah - iyo isboortiga beerta waa diyaar! Waxa kaliya oo muhiim ah in lamaanayaashu aysan xakameynin dhirta iyaga oo si firfircoon u koraya. Dumarka geelka ah waxay u muuqdaan kuwo aad u wanaagsan oo ay la socdaan ferns iyo dalagyada dhirta, dhirta dherer dhexdhexaad ah ayaa lagu dari karaa saxafrage. Abuuritaanka gentmaniyaanka ee gentians ayaa abuuraya qoraallo raaxo leh oo ay ka mid yihiin kooxo leh jilbaha, sage, sedge, muscari, irises, rezuha iyo Levisa. Dhab ahaan, dhir kasta oo dhir ah - daboolka hoose ama rosette - wuxuu noqon doonaa mid ku habboon lammaane.
Xulo xulasho waa in ay sidoo kale ku xiran tahay muddada gentian ubax. Sidaa darteed, gentianas hore ubaxyada waa in laga ilaaliyaa midabka dhalaalaya qorraxda. Doorkaasi si wanaagsan ayaa loo qabtaa. tulliyada, daffodils iyo ubaxyo kale.
Sida loo daryeelo habka koritaanka
Daryeelka gentianka wuxuu noqon karaa mid aad u fudud ama, liddi ku ah, u baahan dadaal culus - waxay dhammaan ku xiran tahay sida dalbashada nooca dhirta ee aad beeray iyo sida wanaagsan ee xaaladaha bilowga ah loo doortay. Tani waxay si gaar ah muhiim ugu tahay gentian muddada dheer, sida goobta si sax ah loo doortay ee ay soo degtey go'aamiyo heerka adag ee daryeelka ee warshadda.
Noocyada intooda badan ee gentian waxay u baahan yihiin waraabin joogto ah. Ciidda waa in aysan qalajin, taas oo gaar ahaan muhiim ah inta lagu jiro muddada ka hor ubax, iyo inta lagu jiro ubax laftiisa. Haddii, sababtoo ah roobab culus, ciidda, lid ku ah, si aad u qoyan, waxaa lagama maarmaan ah in la daboolo si joogto ah si qoyaanku uusan ujoogsanayn agagaarka dhirta oo aad u qoto dheer dhulka.
Isagoo ka hadlaya gentian waraabiya, waa in maskaxda lagu hayaa in qaar ka mid ah noocyada, kuwaas oo si gaar ah dalbanaya acid a ciidda, ha u dulqaadan biyo adag. Dhibaatada waxaa lagu xallin karaa iyada oo la isticmaalayo biyaha kululeeyaha qaboojiyaha ama biyaha roobka, inkasta oo tani ayan mar walba ku habboonayn, iyo weliba, biyaha roobka ma aha door wanaagsan oo u dhow magaalooyinka waaweyn. Waxaad jilicsan kartaa biyaha tuubada adiga oo ku daraya ash alwaax, peat ama citric acid.
Своевременная прополка горечавки обеспечит растению нормальное развитие. Если не запускать процесс, бороться с сорняками вокруг растения достаточно легко, так как сильная корневая система гентианы не боится связанного с этим легкого беспокойства. Neefsashada ayaa ka caawin karta in la baabi'iyo baahida loo qabo in la ilaaliyo cawska. Goobta quruxda leh ee quruxda leh waa mid ufiican ujeedadaas.
Gentian dhab ahaantii uma baahna quudinta, Intaa waxa dheer, dhirta uu ku dhaco xad-dhaaf ah Bacriminta oo ka xun mid aan faa'iido lahayn. Mar labaad, xeerkani wuxuu khuseeyaa inta badan gentian, laakiin sidoo kale waxaa jira noocyo kale oo awood leh oo si fudud u dulqaadan kara xaddi badan oo ka mid ah arimaha organic ama macdanta.
Guud ahaan, gentian wuxuu ku dari karaa peat sanadkiiba mar guga, isagoo intaa ku daray in yar yar oo xiiran (xayawaanka aan u baahnayn jawaab celin ciid ah) - Guano Peruvian, laakiin noocan ah falalka bacriminta si xoog leh, .
Haddii ciidda waa acidic, Bacriminta organic for rhododendrons waxaa loo isticmaali karaa dharka ugu sareeya, iyo haddii ay jirto xad-dhaaf ah ee nuurad ah ee ciidda - Marka laga soo tago peat, waa in lagu daraa walxaha birta ee birta ku jirta.
Ka dib markii quudinta, geedka waa in si fiican u waraabiyo, sidaa darteed bacriminta isku dhafan ee ciidda. Xalalka qaarkood ayaa sidoo kale ku buufin kara caleemaha gentian, laakiin feejignaanta bacriminta kiiskan waa in uu si weyn u yar yahay habka asaasiga ah ee quudinta.
Gooyo nuucyada gentian sare
Dhammaan noocyada manjooyin geel ah waxay lagama maarmaan u yihiin oo keliya noocyada dhererka. Inta lagu jiro ubax, waxaad gooyn kartaa caleemo dhawr ah si ay u sameeyaan bouquet ah, ma dhaawici geedka. Ka dib qalajinta, ubaxa waa la gooyaa, laakiin tani waxay sababtay wax aan loo baahnayn sida ilaalinta soo jiidashada kaynta. Caleemaha la qalajiyey si dhakhso ah looma gooyo, tan waxaa la sameyn karaa oo kaliya guga soo socda, ka dib markii caleemaha yar yar bilaabaan inay ka guuraan baadiyaha.
Guud ahaan, gentianku waa mid u adkeysanaya cayayaanka iyo cudurrada. Dhibaatooyinka noocan ah waxaa badanaa keena daryeel caafimaad oo aan habooneyn, sidaas darteed Habka ugu wanaagsan ee loola macaamili karo waa in la dejiyo xaaladaha sii kordhaya.
Sidaas Dhibaatada ugu weyn ee gentian - kallana - rooti - ay keento biyo joogta ah ee ciidda. Slugs iyo lafaha ayaa ku dhufan kara geedka sababtoo ah huurka badan. Sababahan oo kale ayaa loo sharxi karaa, iyo cudurada fungal ee ku dhaca gentian.
Cayayaanka waa in si farsamo loo soo ururiyaa, qoyaan dheeraad ah oo laga saaro ciidda (loosening or creating the system drainage), ama, haddii ay lagama maarmaan noqoto, beeridda geedka meel u habboon oo loogu talagalay.
Noocyada badan ee gentian ee dabiiciga ah waxay ku koraan xaalado aad u adag, sidaas darteed waxay qabaan adkaysiga qaboobaha ee jiilaalka, iyo dhirta macquulka ah ee dalalkeena lama yaabi karo. Gentian ayaa xitaa barareyn kara heerkul xun, ka dibna, sida haddii aan waxba u dhicin inay la kulmaan guga soo socda.
Si kastaba ha ahaatee, haddii jiilaalka la siiyo qabow iyo baraf lahayn on ciidda, waxaa fiican in lagu daboolo warshadda. Si arrintan loo sameeyo, waxaad isticmaali kartaa laanta maqaarka ama waxyaabo kale oo gacanta ah.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Kordhinta geelka 2020